Wɔsom sika nantwi ba (1-35)
Mose tee sɛ wɔreto dwom soronko bi (17, 18)
Mose de abopon a mmara wɔ so no hwee hɔ ma ebubui (19)
Lewifo no gyinaa Yehowa afã (26-29)
32 Bere a nkurɔfo no hui sɛ Mose akyɛ wɔ bepɔw no so no,+ wɔsoaa wɔn ho kɔɔ Aaron nkyɛn kɔka kyerɛɛ no sɛ: “Sɔre yɛ onyame ma yɛn na onni yɛn anim,+ efisɛ ɔbarima Mose yi a odii yɛn anim fii Egypt asaase so no de, yennim nea ato no.” 2 Ɛnna Aaron ka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Sika kɔkɔɔ asomuade+ a ɛhyehyɛ mo yerenom, mo mma mmarima, ne mo mma mmea no, munyiyi mfa mmrɛ me.” 3 Enti obiara yii sika kɔkɔɔ asomuade a ɛhyɛ no no de brɛɛ Aaron. 4 Ɛnna ogye fii wɔn hɔ, na ɔnan de dade a wɔde di adwini yɛɛ ho adwuma ma ɛyɛɛ nantwi ba honi.*+ Afei wɔkae sɛ: “Israel man, mo Nyankopɔn ni. Ɔno na odii mo anim fii Egypt asaase so.”+ 5 Bere a Aaron hui no, ɔyɛɛ afɔremuka de sii ohoni no anim, na ɔkae sɛ: “Ɔkyena yɛ Yehowa afahyɛ.” 6 Ade kyee no, wɔsɔree ntɛm bɔɔ ɔhyew afɔre ne asomdwoe afɔre. Afei nkurɔfo no tenaa ase didi nomee, na wɔsɔre gyee wɔn ani.+ 7 Ɛbaa saa no, Yehowa ka kyerɛɛ Mose sɛ: “Sian kɔ, na nkurɔfo a wudii wɔn anim fii Egypt asaase so no agu wɔn ho fĩ.+ 8 Akwankyerɛ a mede maa wɔn no, wɔamma mframa amfa so koraa, wɔaman afi ho.+ Wɔayɛ nantwi ba honi,* na wɔrekotow no bɔ afɔre ma no, na wɔka sɛ: ‘Israel man, mo Nyankopɔn ni. Ɔno na odii mo anim fii Egypt asaase so.’” 9 Yehowa ka kyerɛɛ Mose sɛ: “Mahu sɛ nkurɔfo yi aso yɛ den.*+ 10 Me bo afuw wɔn paa; ma mentɔre wɔn ase na menyɛ wo mmom ɔman kɛse.”+ 11 Ɛnna Mose srɛɛ Yehowa, ne Nyankopɔn* sɛ:+ “O Yehowa, wo nkurɔfo a wode tumi kɛse ne nsa a ɛyɛ den yii wɔn fii Egypt asaase so no, adɛn nti na wo bo afuw wɔn saa?+ 12 Adɛn na ɛsɛ sɛ woma kwan ma Egyptfo ka sɛ, ‘Adwemmɔne na ɔde yii wɔn; na ɔpɛ sɛ okunkum wɔn wɔ bepɔw no so na ɔtɔre wɔn ase fi asaase so’?+ Ma wo bo nnwo na gyinae a woasi sɛ wobɛyɛ wo man bɔne no, san hwɛ no bio.* 13 Kae w’akoa Abraham, Isak ne Israel a wode wo ho kaa wɔn ntam no. Woka kyerɛɛ wɔn sɛ, ‘Mɛma mo asefo* ayɛ bebree te sɛ ɔsoro nsoromma,+ na mede asaase a mekyerɛɛ mo no nyinaa bɛma mo asefo,* na ɛbɛyɛ wɔn agyapade daa.’”+ 14 Enti gyinae a Yehowa sii sɛ ɔde bɔne bɛba ne nkurɔfo so no, ɔsesaa n’adwene.*+ 15 Afei Mose sian fii bepɔw no so. Ɔreba no, na Adanse Abopon abien no+ kura no;+ emu biara, na wɔakyerɛw anim ne akyi. 16 Onyankopɔn ankasa na ɔyɛɛ abopon no, na ɔno na ɔkyerɛw so.+ 17 Afei Yosua tee sɛ nnipa no reyɛ dede, na ɔka kyerɛɛ Mose sɛ: “Dede yi de, ɛte sɛ nea ɔko bi asi wɔ asoɛe hɔ.” 18 Nanso Mose kae sɛ: “Ɛnyɛ nkonimdi* ho osebɔ,Na ɛnyɛ nkogudi ho benabɔ;Ɛyɛ dwom foforo na mete yi.” 19 Bere a Mose bɛn asoɛe hɔ a ohuu nantwi ba+ ne asaw no, ne bo fuwii, na ogyaa abopon no mu hwee bepɔw no ase ma ebubui.+ 20 Ɔde ogya hyew nantwi ba a wɔayɛ no, na ɔyam no muhumuhu;+ afei ɔde petee nsu ani maa Israelfo no nomee.+ 21 Ɛno akyi no, Mose bisaa Aaron sɛ: “Dɛn na nkurɔfo yi yɛɛ wo a enti woakodi wɔn akyi de bɔne a ɛte sɛɛ aba wɔn so yi?” 22 Ɛnna Aaron kae sɛ: “Mma me wura bo mmfuw. W’ankasa wunim sɛ nkurɔfo yi de, ɛnkyɛ na wɔreyɛ bɔne.+ 23 Wɔka kyerɛɛ me sɛ, ‘Yɛ onyame ma yɛn na onni yɛn anim, efisɛ ɔbarima Mose yi a odii yɛn anim fii Egypt asaase so no de, yennim nea ato no.’+ 24 Enti me nso mibisaa wɔn sɛ, ‘Hena na ɔwɔ sika kɔkɔɔ? Onyi mma me.’ Afei mede guu ogya mu, na nea efii mu bae ne nantwi ba yi.” 25 Mose hui sɛ nkurɔfo no ayɛ nea wɔn ankasa pɛ, efisɛ Aaron maa wɔn kwan ma wɔyɛɛ nea wɔpɛ de guu wɔn anim ase wɔ wɔn atamfo anim. 26 Afei Mose begyinaa asoɛe no kwan ano bisae sɛ: “Hena na ɔwɔ Yehowa afã? Ɔmmra mmegyina me nkyɛn!”+ Ɛnna Lewifo no nyinaa begyinaa ne nkyɛn. 27 Afei ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Nea Israel Nyankopɔn Yehowa aka ni, ‘Obiara mfa ne sekan mmɔ n’asen, na munkyin asoɛe no mu nkɔ apon ano, na obiara nkum ne nua, nea ɔte bɛn no, ne n’adamfo paa.’”+ 28 Lewifo no yɛɛ nea Mose kae no, na wokum nnipa bɛyɛ 3,000 saa da no. 29 Mose san kae sɛ: “Muntu mo ho nsi hɔ* mma Yehowa nnɛ, efisɛ mo mu biara ne n’ankasa ba ne ne nua adi asi,+ na ɛnnɛ obehyira mo.”+ 30 Afei ade kyee no, Mose ka kyerɛɛ nkurɔfo no sɛ: “Moayɛ bɔne kɛse, enti mɛkɔ Yehowa nkyɛn akɔhwɛ sɛ metumi apata ama mo bɔne anaa.”+ 31 Enti Mose san kɔɔ Yehowa nkyɛn, na ɔka kyerɛɛ no sɛ: “Hwɛ, ɔman yi bɔne so! Wɔde sika kɔkɔɔ ayɛ onyame!+ 32 Nanso wobɛpene a, anka fa wɔn bɔne kyɛ wɔn,+ anyɛ saa a ɛnde mesrɛ wo, popa me din fi nhoma a woakyerɛw no mu.”+ 33 Nanso Yehowa ka kyerɛɛ Mose sɛ: “Nea wayɛ me bɔne no, ɔno na mɛpopa ne din afi me nhoma mu. 34 Afei kodi ɔman no anim kɔ faako a makyerɛ wo no. Hwɛ, me bɔfo bedi w’anim,+ na bere a mɛba abebu atɛn no du a, wɔn bɔne nti mɛtwe wɔn aso.” 35 Ɛnna Yehowa twee ɔman no aso sɛ wɔyɛɛ nantwi ba, nea Aaron yɛe no.
^ Anaa “nkurɔfo yi asen wɔn kɔn.”
^ Anaa “bɔɔ mmɔden sɛ obedwudwo Yehowa, ne Nyankopɔn bo.”
^ Anaa “sesa w’adwene wɔ ho.”
^ Nt., “mo aba.”
^ Anaa “Yehowa sesaa n’adwene wɔ bɔne a ɔde reba ne nkurɔfo so no ho.”
^ Anaa “anwonwadwuma.”
^ Nt., “monhyɛ mo nsam den.”